कोरिया इपिएस शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको फारम भर्न कोटा नतोकिएको धेरै कोटा हुन सक्ने ! - Gulf Sandesh
कोरिया इपिएस शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको फारम भर्न कोटा नतोकिएको धेरै कोटा हुन सक्ने !
काठमाडौँ ,कोरियन भाषा परीक्षाका लागि चैत ८ गतेदेखि आवेदन खुल्ने भएको छ । सन् २०१९ का लागि कोरियाले नेपाली श्रमिकको कोटा निर्धारण गरेर पठाएपछि भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिने मिति तय गरिएको हो ।
सञ्चारमाध्यममा पहिलो चरणमा १२ हजार जनाको फारम मात्रै लिइने भनेर समाचार सार्वजनिक भएकोमा इपिएस कोरिया शाखाले त्यो समाचार सत्य नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
← नेपाल र कतारबीच बस्ने वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतार सग आज पनि छलफलमा बस्दै।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एम ओ सीमा हस्ताक्षर गर्ने। →
के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? चिन्ता नमान्नुस्, सरकारले तपाईँलाई बेरोजगार भत्ता दिनेछ
संखुवासभामा यहि माघ २ गते देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने आखाँ तथा कानको सिबिर हुदै।
काेलाेम्बाे प्राेसेसमा नेपाल सहित एसियाका १२ देशहरूकाे सहभागिता रहेकाे छलफलका केहि घलक हरु।
November 16, 2018 GulfSandesh 0